ဒါဟာတကယ်ပဲအရေးကြီးပါတယ် သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကို Reset ဟက်ကာများကနေသင့်ရဲ့အကောင့်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခဏတစ်ပြီးနောက်. ဒါကြောင့်, ဒီနေရာမှာငါနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များကိုဤဆောင်းပါးကိုဖန်တီး Yahoo Mail Password ကို Reset. ဒါဟာတကယ်ကိုပဲဒီဆောင်းပါးကိုလိုက်နာရိုးရှင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တခုဖြစ်ပါတယ်. Greatpeople.ငါ့ကို Kroger ဝင်မည်ထမ်း Portal ကို
ငါခြေလှမ်းနည်းလမ်းအားဖြင့်အလွန်ရိုးရှင်းပြီးခြေလှမ်းကို အသုံးပြု. ဤဆောင်းပါးရာ၌ခန့်ထားပြီ, နှင့်လည်းအလွယ်တကူလူတိုင်းအားဖြင့်နားလည်ရန်အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့ဘာသာစကားအသုံးပြုသော. သင်တို့အဘို့အရှာနေနေတယ်ဆိုရင် Yahoo Mail Password ကိုပြောင်းလဲနည်း သို့ဖြစ်လျှင်ဤဆောင်းပါးကိုသင်အလွယ်တကူကြောင့်ဖြည့်စွက်ရန်ကူညီပေးပါမည်.
ဤဆောင်းပါး၏အောက်ဆုံးမှထိပ်တန်းမှတဆင့်သွားပြီးမှခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာ Yahoo Mail Password ကိုပြောင်းလဲပါ. သင့်ရဲ့ Username နှင့် Password ကိုသုံးပြီးသင့်ရဲ့ Yahoo Mail အကောင့် login ရန်သင့်အားပထမဦးဆုံးလိုအပ်. ထိုအခါခြေလှမ်းများမှအောက်ပါပြီးနောက် Yahoo က Password ကိုပြောင်းလဲပါ.
Yahoo Mail Password ကို Reset | အဆင့်အပြီးအစီးလမ်းညွှန်အားဖြင့်အဆင့်
အဘို့အောက်ကဖော်ပြထားမှုလုပ်ငန်းစဉ်ထုတ်စစ်ဆေး Yahoo Mail Password ကို Change. ဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းသူတို့ကို Follow နှင့်အောင်မြင်စွာလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖြည့်စွက်.
ဤနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တရားဝင် Yahoo Mail က်ဘ်ဆိုက်မှ Enter: login.yahoo.com
ယခု, သင့်အီးမေးလ်လိပ်စာနှင့်စာနယ်ဇင်း Enter “နောက်တစ်ခု”.
ပြီးနောက်, သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုနှင့်စာနယ်ဇင်းရိုက်ထည့်ပါ “ဆိုင်းအင်လုပ်ခြင်း”.
ယခု, ညာဘက်အထက်ထောင့်ပေါ်တွင်သင်၏နာမကိုအမှီနှင့်အတူသင်၏ပရိုဖိုင်ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုသွားနှင့်အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ “အကောင့်အင်ဖို”.
သငျသညျအကောင့်အင်ဖိုကို click သကဲ့သို့သင်တို့အသစ်က tab ကိုမှ redirect ပါလိမ့်မယ်. သငျသညျတခု option ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည်အကောင့်လုံခြုံရေးအပေါ်ဒီနေရာတွင်ကလစ်နှိပ်ပါ “စကားဝှက်ကိုပြောင်းရန်” စာမျက်နှာ၏လက်ျာဘက်၌.
ယခု, ယင်းအတည်ပြုခြင်းနှင့်နှိပ်ဖို့ကို click နဲ့ New password ကိုနှစ်ကြိမ်ရိုက်ထည့်ပါ “ဆက်လက်” ကြယ်သီး.
သင့်ရဲ့ Yahoo Mail Password ကိုအောင်မြင်စွာယခုပြောင်းလဲ.
ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. အပြည့်အဝသတင်းအချက်အလက်ထောက်ပံ့ Yahoo Mail Password ကိုပြောင်းလဲနည်း. သင်ရုံများအတွက်ခြေလှမ်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအားဖြင့်ခြေလှမ်းအတိုင်းလိုက်နာရန်ရှိသည် Yahoo Mail Password ကို Change. ငါသည်လည်းအလွယ်တကူဖြစ်စဉ်ကိုနားလည်ပြီးဖြည့်စွက်ဖို့ခြေလှမ်းနှင့်အတူပုံရိပ်တွေကိုထားကြပြီ.
သင်ဤဆောင်းပါးနှင့် ပတ်သက်. သင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ဝေမျှမယ်ဆိုရင်ဒါဟာသင်သည်မည်သည့်မေးမြန်းမှုရှိလျှင်ပင်ကိုလည်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောဖော်ပြချက်မှတ်ချက် box ကိုသုံးပြီးဝေမျှတကယ်ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ဖြစ်ပါသည်. နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ website ကိုမှာဤကဲ့သို့သောမှန်မှန်အသုံးဝင်သော update ကို get www-hotmail-com.email.
အောက်မှာ Filed: လျှို့ဝှတ်နံပါတ်အားမူလအတိုင်းပြန်လုပ်သည် အတူ Tagged: Yahoo Mail Password ကိုပြောင်းလဲပါ, Yahoo Mail Password ကို Reset, Yahoo Mail Password ကိုပြန်ညှိမှု